မနေ့က ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ တံခါးပိတ် လွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (ရုပ်သံ) ~ ဒီမိုဝေယံ
မနေ့က ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ တံခါးပိတ် လွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (ရုပ်သံ)
Xinhua News Agency ရုပ်သံ
၃၀ရက်နေ့ ပထမနေ.က စည်ပင်ဝင်းထဲမှာ သတင်းထောက်အချို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား အရင်ဆုံး အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ အတွက် ပြသနာတတ်ကြောင်း သတင်းထောက်အချို့ ရဲစခန်းသို့ အခေါ်ခံရပါတယ်။ ၃၁ရက်နေ့. အစည်းဝေးမစခင်မှာ ရဲစခန်းသို့ ရောက်သွားခဲ့ကြောင်း သူတို.ကို ဓါတ်ပုံရိုက်သွားလို. ဆိုပြီး။ ခဏခေါ်ယူမေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။